juin 2018 - Page 46 sur 102 -
Minisiteran’ny Raharaham-bahiny : Tontosa ny fifamindram-pitantanana
16/06/2018 admintriatra 0
Efa eto an-tanindrazana ny minisitry ny Raharaham-bahiny (MAE) vaovao, izay vao notendrena hanatevin-daharana ireo mpikambana eo anivon’ny governemantan’ny marimaritra iraisana, Dovo Eloi Maxime. Araka izany, dia notanterahina omaly tetsy amin’ny foiben’ny minisitera etsy Anosy, ny …Tohiny
Mpanao fanisam-bahoaka : Voakapan’ny famaky teo amin’ny lohany
Lehilahy iray manodidina ny 25 taona indray no niharan’ny habibiana, tany amin’ny fokontany Ambohimarina Ambonivohitra, distrikan’Ambato-Boeny ampita andrefan’i Betsiboka. Ny harivan’ny alarobia 13 jona lasa teo, tokony ho tamin’ny 7 ora hariva no nisy nahita …Tohiny
Behoririka : Rindrina nirodana nandratrana olona telo
Namoa-doza fanindroany indray ny ampahana rindrina efa nirodana teny Behoririka izay namoizana ain’olona efatra, herinandro vitsy lasa izay. Omaly tokony ho tamin’ny 01 ora sy sasany tolakandro no nitrangan’ny loza izay tampoka sy tsy nampoizina …Tohiny
Toliara : Zazavavy 14 taona naolana mpitondra fivavahana
Zazavavy mpianatra vao 14 taona monja no niharan’ny herisetra ara-nofo nisesisesy nataona mpitondra fivavahana iray any amin’iny distrikan’i Toliara iny. Ankoatra ny fanolanana nihatra taminy, dia voalaza ihany koa fa bevohoka dimy volana ity zaza …Tohiny
Voapetraka soa aman-tsara teny amin’ ny biraon’ ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana omaly, ilay fehin-kevitra tapaka nandritra ny « conférence souveraine » notanterahin’ireo kandidà teny amin’ny CCI Ivato. Tao anatin’ ny fahanginana no natanterahan’ ireo kandidà ...Tohiny